भारतीका मिल्ने साथी मिल्ने साथी कमेडियन राजू श्रीवास्तव भन्छन्,‘भारतीले इंडस्ट्रीलाई नै क’लंकित बनाई दिईन्’ « Etajakhabar
भारतीका मिल्ने साथी मिल्ने साथी कमेडियन राजू श्रीवास्तव भन्छन्,‘भारतीले इंडस्ट्रीलाई नै क’लंकित बनाई दिईन्’
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित हाँस्य कलाकार भारती सिंहले ‘ड्र ‘ग्स लि’न्छिन् भन्ने खबरले यतिबेला पुरै बलिउडमा भूँईचाल आएको छ । त्यसैमाथि आज भएको जेल चलानले त झनै बलिउडमा पुरै हाँस्य कलाकारहरुलाई नै अ’चम्मित बनाएको छ । भारतीको ड्र’ ”ग्स केस र गि’रफ्ता’रीसंगै भएको जे’ल चलानको विषयमा सबैले आफ्नै आफ्नै विचार र राय दिईरहेको बेला कमेडियन राजु श्रीवास्तले पनि आफ्नो विचार दिएका छन् ।
राजूले एक अन्तरवार्तामा भनेका छन्,‘कमेडी गर्नकोलागी भारतीलाई किन ड्र ”ग्सको से’व’न गर्नु पर्यो र ? उनको सबै कुरा राम्रो नै चलिरहेकै थियो । जनताको माया, साथ, र समर्थन पाई रहेकी थिईन् । यो सबै कुरा पाउने कलाकार त इंडस्ट्रीकै भाग्यमानी कलाकार हो । भारती त्यही भाग्यमानी कलाकार थिईन् । उनलाई त केही कुराकै कमी थिएन । फेरी किन गरिन् यस्तो भारतीले ? मलाई त विश्वास नै लागिरहेको छैन । भारतीको यो हरकतले पुरै इंडस्ट्रीलाई नै ध’ब्बा’ लगाई दिएको छ । ’
कलाकार राजूले शुरुमा आफुलाई यो खबरप्रति विश्वास नै नलागेको बताएका छन् । राजूले भारतीलाई आफ्नो राम्रो साथी भएको पनि बताएका छन् । उनले भारतीको विबाहमा आफुहरुले निकै नै इन्जोय गरेको बताए । विबाह सकिएपछि पनि लामो समयसम्म आफुहरुले भारती र हर्षको विबाह भोज खाएको बताए ।
यस्तो मिल्ने साथीको बारेमा यस्तो कुरा सुन्दा पत्याउनै गाह्रो भएको राजूले उक्त अन्तरवार्ताका दैडान सुनाएका थिए । राजूले समाचारहरु जे जस्तो आईरहेका थिए त्यसमा आफुले बिल्कुलै पनि पत्याएका थिएनन् । तर जब भारतीले ‘ड्र ‘ ग्स लिने गरेको कुरा आफैले कवुल गरिन् त्यसपछि भने नपत्याई नहुने उनले बताए ।
नायक सुशान्त सिंह राजपुतको निधनपछि बलिउड कलाकार एनसीबीको नि’शानामा परेका छन् । यसअघि नायक अर्जुन रामपाल पनि यहि आ’रोपमा एनसीबीको कार्यलयमा बयानका लागि पुगेका थिए ।
नायिकाहरु दीपिका पादुकोण, साराअली खान, राकुल प्रित सिंह, श्रद्धा कपुर, रिया चक्रवर्तीलाई पनि एनसीबीले सोधपुछ गरिसकेको छ ।
भारती स्टार वनमा आउने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चेलेंज (सीजन ४)को दोस्रो रनर अप रहिन्, जहाँ उनको स्टंड अप कमेडीको काल्पनिक पात्र लल्लीको धेरै प्रशंसा भयो। उनी एक प्रतियोगीको रूपमा कमेडी सर्कस २०१०को सीरीज कमेडी सर्कसको सुपरस्टार्स र कमेडी सर्कसको जादूमा पनि उपस्थित भइन् ,र २०११मा जुबली कमेडी सर्कस, कमेडी सर्कसको तानसेन र कमेडी सर्कसको नया दौरमा पनि भाग लीइन् जो सोनीमा प्रसारित भएको थियो।